Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Inona no vaovao any amin'ny nosy The Bahamas amin'ny volana aprily
Vaovao momba ny dia any Bahamas • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Karaiba • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • etn • Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • fanorenana • Resort News • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Tourism • Vaovao momba ny fizahantany • Travel • Toerana fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Vonona ny Bahamas hanohy hitondra ny mpitsidika ny traikefa vakansy tsy manam-paharoa izay fantatra
Crystal Cruises sy Royal Caribbean dia nanambara ny fiverenany any The Bahamas amin'ity fahavaratra ity
Nomena mari-boninahitra sivy tamin'ny Bahamas World Travel Awards i Bahamas
Ny minisiteran'ny fizahantany any Bahamas dia notendrena ihany koa ho an'ny sokajy fizaran-tany mpitarika ny fizahan-tany any Karaiba 2021
Mafana i Bahamas amin'ity lohataona ity miaraka amin'ny fanambarana vao haingana momba ny fiverenan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny volana ho avy sy ireo tranokalan'ny Amerika Avaratra an'ny Expedia Group izay nampitombo ny 170% ny fikarohana momba ilay toerana halehany tamin'ny volana feb. Miaraka amin'ny fisokafana fanampiny fanampiny, ny Bahamas dia vonona ny hanohy hitondra ny mpitsidika ny traikefa vakansy tsy manam-paharoa izay fantatra.
Hiverina any amin'ny Ny Bahamas - Crystal Cruises sy Royal Caribbean dia nanambara ny fiverenany any The Bahamas amin'ity fahavaratra ity. Crystal Cruises dia hiasa ao anaty baomba any Bahamas miaraka amin'ireo zotra fitetezana miantso an'i Nassau, Bimini, Harbor Island, Great Exuma, San Salvador ary Long Island. Nanambara i Royal Caribbean fa i Nassau no homeport ho an'ny Adventure of the Seas manomboka amin'ny volana Jona ary hitsidika nosy fanampiny anisan'izany ny Nosy Grand Bahama sy ny Perfect Day ao amin'ny CocoCay, toerana tsy miankina Bahamas an'ny Royal Caribbean.
Ny Ministeran'ny Fizahan-tany Bahamas dia nandefa ny tantaran'ny tantaram-pitiavana - Manoloana ny fampiroboroboana ny tantaram-pitiavan'olon-droa mpanjifa, avy amin'ny The Bahamas With Love, ny Minisiteran'ny Fizahan-tany sy ny fiaramanidina Bahamas dia namoaka ny gazety tantaram-pitiavany nomerika amin'ny anarana mitovy. Ity magazine ity dia misy atiny manokana momba ny drafitry ny fampakaram-bady, ao anatin'izany ny tolo-kevitra ao amin'ny toerana ambony, aingam-panahy momba ny fandrindrana lanonam-pananahana ary natao tao amin'ny haingon-trano The Bahamas sy ny toro-hevitra momba ny paika.
Rivo-doza Hole Superyacht Marina Fanitarana sy fanarenana andrasana amin'ny Q4 2021 - Malaza eo amin'ireo mpandeha an-dranomasina, ny fisokafan'ny Hurricane Hole Superyacht Marina ao amin'ny Paradise Landing dia noheverina ho vita Q4 2021. fisakafoanana tsara sy kojakoja lehibe natao ho an'ny tompona, vahiny ary ekipa yacht, ary koa docka mahatratra 420 metatra sy 6,100 metatra mitanjozotra anaty rano mitsingevana.
Misokatra ho an'ny vahiny ny Lighthouse Pointe - Ny 25 martsa, ny Lighthouse Pointe ao amin'ny Grand Bahama Island dia nisokatra ho an'ny vahiny ho ampahany amin'ny fisokafan'ny Grand Lucayan Resort. Ahitana efitrano fandraisam-bahiny 200 sy trano fisakafoanana maromaro eo an-toerana ny trano.
Misokatra indray ny Distillery an'i John Watling - Nosokafana indray ireo mpitsidika ny fantsom-panafody Bahamianina malaza, Johnistling's Distillery, tamin'ny faran'ny volana martsa. Ny fitsangatsanganana maimaim-poana dia misy ho an'ireo mpitsidika fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva
Nanangana vavahady fandoavam-bola nomerika ho an'ny mpanao sambo sy mpanarato i Bahamas - Nanangana vavahady elektronika ny Sampan-draharahan'ny fadintseranana sy fividianana entana any Bahamas ary ny minisiteran'ny vola mba hamandrihana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny sambo sy ny jono mba hamandrihana amin'ny Internet.
Ny Bahamas dia nahazo ny alimo tamin'ny 2021 Award Adrian - Ny International Association Sales and Marketing Association dia hanome voninahitra ny Minisiteran'ny fizahantany sy ny fiaramanidina Bahamas miaraka amin'ny loka Bronze Adrian ao amin'ny sokajy Fanentanana Marketing Integrated ho an'ny fampielezan-keviny Still Rockin '. Taorian'ny rivodoza Dorian, ny fampielezan-kevitry ny BMOTA Still Rockin dia nanasongadina ireo nosy lehibe 14 tsy voatafika noho ny tafio-drivotra, izay nahatonga ny mpitsidika 7.2 tapitrisa nitsidika ny firenena tamin'ny taona 2019.
Ny Bahamas dia nomem-boninahitra tamin'ny fanolorana anarana sivy ao amin'ny World Travel Awards - Ny nosy Bahamas dia voafantina ho olom-boatendry ao amin'ny 28th World Travel Awards isan-taona ary voatendry ao amin'ny sokajy amoron-dranomasina, sambo, antsitrika, volan-tantely ary sokajy toeran-kaleha ankapobeny. Ny minisiteran'ny fizahantany any Bahamas dia notendrena ihany koa ho an'ny sokajy fizaran-tany mpitarika ny fizahan-tany any Karaiba 2021. Misokatra izao hatramin'ny 2 aogositra 2021 ny fifidianana.